China Usb-C hub-CH06A fekitari uye vagadziri | Brocade Boka
Matatu USB 3.0 madoko ekuchinjisa data anomhanyisa anosvika ku5Gbps. Wedzera chidzitiro chako neHDMI chiteshi kuHDTV, tarisa kana purojekita. Tsigira HDMI kuburitsa inosvika ku4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) resolution
Parizvino, zvigadzirwa zveBrocade USB C zvakatumirwa kune nyika dzinopfuura makumi matanhatu nenzvimbo dzakasiyana, senge Southeast Asia, America, Africa, Eastern Europe, Russia, Canada etc. Tinotarisira nemoyo wese kutanga kusangana kwese nevose vanogona kuve vatengi muChina uye chikamu chasara chenyika.
Isu tinovimbisa kuti Brocade ichaedza nepatinogona napo kudzikisa mutengo wekutenga kwevatengi, kupfupisa nguva yekutenga, kugadzikana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuwedzera kugutsikana kwevatengi uye kuwana kuhwina-kuhwina mamiriro.
Tinotarisira kunzwa kubva kwauri, ungave uri mutengi ari kudzoka kana mutsva. Tinovimba uchawana zvauri kutsvaga pano, kana zvisiri, ndokumbirawo utibate nekukasira. Isu tinozvikudza pamusoro pepamusoro notch sevhisi uye mhinduro. Ndinokutendai nebhizimisi renyu uye rutsigiro!
Hunhu hweedu USB C chigadzirwa chakaenzana nehunhu hweOEM, nekuti edu epakati zvikamu zvakafanana neOEM mutengesi. Iyo USB C zvigadzirwa zvakapfuura zvehunyanzvi chitupa, uye isu kwete chete tinokwanisa kuburitsa OEM-yakajairwa zvigadzirwa asi isu zvakare tinogamuchira Yakasarudzika Zvigadzirwa odha.
Pashure: Yakareba Range 2624ft. Wireless Vhidhiyo Transmission System
Zvadaro: Usb-C hub-CH06B
Rinoshanda 3 * USB3.0 Kusvika ku5Gbps
1 * Type C Kusvikira ku5Gbps
1 * 3.5mm audioconvenient kushandisa
Plug & playHapana kudikanwa kwekuisa Mutyairi
Kuendesa Simba 87W Max. 100W
Ruvara Grey / Green / Gamuchira Kugadziriswa